साङ्गीतिक क्षेत्रमा अस्ताएका मनोरथको राजनीतिमा उदय
शेर भण्डारी डडेल्धुरा, ९ चैत
‘माघ छाडी फागुनका मैना, पिपल पाते लै लै, सिमल फुल्लै रन्छ सुवा, भेट होला कि कैलै !’
कुनै समय सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा चर्चामा रहेको देउडा गीत हो यो ।
डडेल्धुराको अमरगढी– २ मतरागाउँमा जन्मिएका सुदूरपश्चिमका चर्चित देउडा गायक हुन्, मनोरथ खडायत । विशेषगरी सुदूरपश्चिमका मान्छेको मनमनमा बसेका खडायतले पछिल्लो समय भने गीत बजारमा ल्याएका छैनन् ।
उनले गीत बजारमा नल्याएपछि उनका गीत रेडियो नेपालबाट सुन्नेहरू अझै पनि उनलाई खोजिरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा निकै नाम चलेका अन्य कलाकारभन्दा पनि खडायत निकै चर्चित थिए ।
साङ्गीतिक क्षेत्रबाट निकै चर्चामा आएका खडायत एकाएक साङ्गीतिक क्षेत्रबाट हराए । उनी साङ्गीतिक क्षेत्रबाट हराएपछि उनका गीत सुन्नेहरूले उनलाई खोजिरहे ।
धेरैले अझै पनि उनलाई खोजिरहेका छन् । कहिले खडायतका गीत बजारमा आउलान् र सुन्न पाउँला भन्ने आशामा अझै यस क्षेत्रका स्थानीय पर्खाइमा बसेका छन् । लामो समयसम्म खडायतका गीत बजारमा नआएपछि अहिलेका पुस्ताले त मनोरथ खडायत कलाकार हो र ? भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
‘आर्थिक अभावले गीत गाउन छाडेँ’
२०५३ सालदेखि गायन क्षेत्रमा लागेका खडायतका दर्जनभन्दा बढी गीत बजारमा आएका छन् । उनले यो क्षेत्र छाडेको १५–१६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । उनी आर्थिक अभावका कारण कलाकारिता छाडेको बताउँछन् ।
गाउँको सामान्य गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए खडायत । बुबाआमाले खेती किसानी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्थे । साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागे पनि गीत रेकर्ड गर्ने पैसा नभएर कतिपय गीतहरू रेकर्डसमेत गर्न नसकेको उनीसँग तीतो अनुभव छ ।
आर्थिक अभावका कारण साङ्गीतिक क्षेत्र छाडेको उनको भनाइ छ । डडेल्धुराबाट गीत रेकर्ड गराउन काठमाडौं जाँदा आफूसँग पैसा नभएर अरूसँग पैसा मागेर गएको उनी सुनाउँछन् ।
गीत गाउन पहिलोचोटि काठमाडौं आएका खडायत काठमाडौंको बबरमहल नजिकै रहेको रिमा स्टुडियोमा पसे ।
बजारमा गीत आउला र सबैले चिनून् भनेर मनमा सोचे । डडेल्धुराबाट काठमाडौं जाँदा २ हजार ५ सय रुपैया बोकेका उनलाई स्टुडियो मालिकले गीत रेकर्ड गराउन २५ हजार रुपैयाँ लाग्छ भनेपछि उनको सपना छिनभरमै चक्नाचुर भयो । उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।
डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाका भेषराज पन्त भन्ने एक जना उनका साथी काठमाडौंमा पढिरहेका थिए । पन्तले उनलाई सहयोग गरे । एक दिन काठमाडौंको टुँडिखेलमा द रेयुकाई संस्थाको कार्यक्रम थियो । त्यति बेला द रेयुकाई व्यापक चर्चामा थियो ।
त्यस कार्यक्रममा खडायतले गीत गाउँदा सुदूरपश्चिमका थुप्रै साथीहरूले ताली बजाए । उनको स्वर सुनेर उनलाई गीत गाउन हौसला दिए । सबैले गीत निकाल्नका लागि आर्थिक सहयोग गरेर उनले ‘पीपलपाते लै लै’ बोलको गीत बजारमा ल्याए ।
थुप्रै गीत बजारमा ल्याउँदा पनि घर परिवारको आर्थिक खर्च गीत गाएर नचल्ने भएपछि उनले व्यवसाय गर्ने विचार गरे । आर्थिक समस्याकै कारण उनले पढाइ पनि बीचमै छाडे । घर परिवारको सबै कुरा चलाउन समस्या भएपछि व्यवसायमा लागेका उनी विस्तारै साङ्गीतिक क्षेत्रलाई छाड्दै उनी साङ्गीतिक क्षेत्रबाट हराए । उनी भन्छन्, ‘इच्छा हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावका कारण साङ्गीतिक क्षेत्र छाड्न बाध्य भएँ ।’
आर्थिक अवस्थाले कलाकारिता क्षेत्रमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । पैसा छ, सवारी साधन छ, राम्रो कोट लगाएको छ भने मात्र सबैले विश्वास गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामान्य ज्याकेट लगाएर स्टेजमा जाँदा दर्शकहरूले गीत नै सुन्दैनन्’, उनी भन्छन्, ‘आफूसँग जस्तोसुकै प्रतिभा भए पनि पैसा छैन भने काम छैन ।’
‘फेरि बजारमा गीत ल्याउँछु’
साङ्गीतिक क्षेत्र छाडेर १५–१६ वर्षपछि फेरि उनलाई बजारमा गीत ल्याउने रहर लागेको छ । आफूले गाएका पुराना गीतहरूलाई फेरि रेकर्ड गरेर नयाँ तरिकाले भिडियोसहित बजारमा ल्याउने उनले बताए ।
धेरै मानिसहरूले कुनै समयमा गीत गाउने मनोरथ खडायत मरिसक्यो कि जिउँदै छ ? भनेर आफूलाई खोजिरहेको उनको भनाइ छ । ‘मनोरथ खडायत अहिले पनि जिउँदै छ । अमरगढी– २ को वडा अध्यक्ष भएर जनताका लागि काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘मेरो श्रोताहरूका लागि र मेरो गीतको पर्खाइमा बसेका आमनेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि भए पनि बजारमा गीत ल्याउँछु ।’
अब राजनीतिसँगै साङ्गीतिक यात्रालाई अगाडि बढाउने र नयाँ वर्षमा बजारमा गीत ल्याउने उनको योजना छ । ‘एकचोटि जनताको माझ फेरि आउँछु र बजारमा गीत ल्याउँछु’, उनले भने ।
अहिले सुदूरपश्चिमका मेला, महोत्सवमा समेत स्थानीय देउडा भाका गाउने कलाकारहरूको संख्या ह्वात्तै घटेको उनी बताउँछन् । त्यतिबेलाका गीत म्युजिकविनाका हुने तर पनि सुनौँसुनौँ लाग्ने किसिमका भएका उनको अनुभव छ । अहिलेको जस्तो म्युजिक हुने भए ‘सुनमा सुगन्ध’ जस्तै हुने उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय कलाकार उपेक्षामा परे’
अहिलेका मेला, महोत्सवमा समेत स्थानीय कलाकारलाई उपेक्षा गरिने गरेको उनको भनाइ छ । महोत्सवको व्यानरमा स्थानीय कला, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने भने पनि स्थानीय कलाकारलाई नबोलाउने गरेको उनले बताए ।
‘स्थानीय कलाकारलाई कसैले मनपराउँदैनन् । त्योभन्दा २–४ रुपैयाँ बढी नै किन नहोस्, काठमाडौंबाट कलाकार बोलाउने परिपाटी छ’, उनी भन्छन् । तर, आफू जस्ता कलाकारहरूले स्थान नपाएको उनको दुखेसो छ ।
भर्खर डडेल्धुरामा सम्पन्न चौथो डडेल्धुरा महोत्सवमा पनि आफू जस्ता थुप्रै कलाकारहरूलाई उपेक्षा गरेको उनले बताए । उद्योग वाणिज्य संघ डडेल्धुराले आफूलाई गीत गाउन नबोलाएको उनले दुखेसो पोखे ।
‘मनोरथ खडायतले गीत गाउँछ र गाउन सक्छ । एकचोटि बोलाऊँ कि भन्ने सोचसमेत आएन’, उनी भन्छन्, ‘सोच आए पनि स्थानीय कलाकारलाई कसैले मनपराउँदैनन् । सित्तैमा पैसा दिनुपर्छ । यिनीहरूलाई बोलाउनु भन्दा पैसा दिएर बाहिरको कलाकार बोलाउने गरेका छन् ।’
आफूहरूलाई पैसाभन्दा पनि मञ्चमा गएर दर्शकको माझमा गीत गाउन पाए पुग्ने तर कसैले अवसर नै नदिने उनले गुनासो गरे ।
उनी भन्छन्, ‘स्थानीय मेला, महोत्सवमा निमन्त्रणा गरेमा म पनि गीत गाउँछु भनेर चिनाउन पाउँथेँ । बेवास्ताका कारण म जस्ता थुप्रै पुराना कलाकार ओझेलमा परेका छौँ ।’
सफल व्यवसायीका रूपमा चिनिँदै
डडेल्धुराको अमरगढी– ५ भीमदत्त चोकमै उनले कोनिका फोटो स्टुडियो सञ्चालन गरी सफल युवा व्यवसायीको रूपमा चिनिन थालेका छन् । साङ्गीतिक क्षेत्र छाडेर व्यवसायतिर लागेका उनले आफ्नो घर परिवार त्यसैबाट धानिरहेका छन् ।
उनले यसै व्यवसाय सँगसँगै राजनीतिक यात्रासमेत सुरु गरेका छन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा उत्कृष्ट फोटो खिच्ने फोटो स्टुडियो भनेर पनि उनको फोटो स्टुडियो चिनिन्छ । दैनिक फोटो खिच्नका लागि थुप्रै मानिसहरू उनको स्टुडियोमा घुइँचो नै लाग्ने गरेका छन् ।
साङ्गीतिक क्षेत्र छाडेपछि उनले आफ्नो जीविकोपार्जनदेखि लिएर सम्पूर्ण परिवारको जीवन यसैबाट चलाइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘देख्नेले मलाई धेरै धनी भनेर सोच्ने गर्छन् तर अरूले सोचेजस्तो धनी म छैन ।’
अनि बने अमरगढी– २ का वडा अध्यक्ष
सङ्गीत र व्यवसाय मात्र होइन, उनी राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । उनी लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध छन् । उच्च राजनीतिक चरित्र भएका इमान्दार नेताका रूपमा डडेल्धुरामा चिनिने गरेका छन् खडायत ।
व्यक्तिगत स्वार्थलाई बिर्सेर राजनीतिमा सक्रिय खडायतले जिल्लामा लोकप्रिय छवि बनाएका छन् । देशमा आएका हरेक राजनीतिक परिवर्तमा जिल्लामा बसेर नेतृत्वदायी भूमिका उनले खेलेका छन् ।
व्यक्तिगत जीवनभन्दा जनसेवालाई नै महत्त्व दिने उनी २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट वडा अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन लडेका थिए । उनले तत्कालीन नेकपा एमालेका नेतालाई भारी मतले पराजय गरेर अमरगढी नगरपालिका– २ का वडा अध्यक्षमा विजय भएका थिए ।
अमरगढी नगरपालिका– २ मा अध्यक्ष भएर आइसकेपछि स्थानीयले विकासको अनुभूति गर्न पाएको बताउँछन् उनी । अहिले वडामा रहेका प्रत्येक गाउँमा बाटो निर्माण भएको छ । वडालाई तरकारी पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनाउन कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।
अमरगढी– २ को लेकाली वस्ती मडुवामा यातायातको समस्या र त्यहाँ उत्पादित वस्तु बजारमा ल्याउन समस्या हुने भएका कारण आफूले पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।
अहिले जनप्रतिनिधिहरूले विशेष गरेर सडकमा प्राथमिकता दिने गरेको भए पनि आफूले सडक भन्दा पनि जनताका अन्य आवश्यकतालाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने बताए । देशमा युवा बेरोजगारीको समस्या रहेकाले युवालाई आफ्नै ठाउँमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ९, २०७६, ०२:०८:००